James Swan” Doorashada Golaha Shacabka Soomaaliya waa in si deg deg ah loo soo geba-gabeeyaa” | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	James Swan” Doorashada Golaha Shacabka Soomaaliya waa in si deg deg ah loo soo geba-gabeeyaa”
James Swan oo Arbacadi Golaha Ammaanka ee qaramada Midoobay uga warbixiyey xaaladda Soomaaliya waxaa uu sheegay inuu bogaadinayo dadaallada billowga ah ee socdo oo lagu doonayo in lagu dhaqaajiyo doorashada golaha wakiillada shacabka.
Swan wuxuu sheegay in horumar laga gaaray hannaanka doorashadaSoomaaliya, waloow uu gaabis ka muuqdo. Wuxuuna sheegay inuu soo dhaweynayo doorashada dhawaan la soo gaba gabeeyay ee dhammaan 54-ta kursi ee Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Wuxuna intaa ku daray iney tahay tallaabbo dhiiragelin leh in 14 haween ah ay dhawaan la wareegi doonaan xilka sanatarnimo, tiradaas oo ka dhigan 26 boqolkiiba xubnaha Aqalka Sare. Sidoo kale waxaa dhiirigelin leh in ay bilaabatay doorashada Golaha Shacabka, iyadoo 2 ka mid ah 275- kii kursi la soo dhameystiray, waxaana toddobaadkaan la shaaciyay in doorashada 11 kursi oo dheeri ah ay bilaabaneyso.
Wuxuu intaa raaciyey marka laga soo tago diyaargarowga doorashada heer qaran, ay si nabad ah u qabsoomeen doorashooyin toos ah oo bishii Oktoobar ka dhacay saddex degmo oo ka tirsan Puntland, taasoo muujisay suurtagalnimada in doorasho qof iyo cod ah ay dhici karto waxayna hoosta ka xariiqday rabitaanka dadka Soomaaliyeed ee ku aaddan ka qaybgalka siyaasadda iyadoo la raacayo nidaamka caalamiga ah ee doorashooyinka.
James Swan” Doorashada Golaha Shacabka Soomaaliya waa in si deg deg ah loo soo geba-gabeeyaa” was last modified: November 18th, 2021 by warsan radio